खुसीको खबर: कोरोना जितेका युवकले घर पुगेर भने – म ठीक हुन्छु भन्नेमा ढुक्क थिएँ ! «
खुसीको खबर: कोरोना जितेका युवकले घर पुगेर भने – म ठीक हुन्छु भन्नेमा ढुक्क थिएँ !
Published : 22 April, 2020 7:21 am
स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या आएपछि ११ चैत्रमा धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल पुगेका धनगढीका ३४ बर्षका युवक अन्तत कोरोना भाइरसलाई जितेर २८ दिनपछि मंगलबार घर फर्किए । दुबईबाट भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै नेपाल आएका ती युवकमा चैत १४ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । कोरोनाको उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका युवकले ठूलो आत्मविश्वासले कोरोना जितेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘मेरो हिम्मत र विश्वासले कोरोना पराजित भएको हो,’ अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएलगत्तै उनले अनलाइनखबरलाई भने ‘डाक्टर र नर्सहरुले पनि ठूलो जोखिम मोलेर उपचार गर्नुभयो ।’
२८ दिनसम्म उनको अस्पताल बसाइ सहज भने भएन ।
‘सुरुका केही दिन त धेरै डराएँ’ उनले भने, ‘सबैतिर मरेको खबरमात्रै सुन्थेँ ।’
कोरोनाका कारण विश्वको मृत्युदरले उनलाई सबै भन्दा बढी बिक्षिप्त पार्‍यो । ‘जहाँ पनि कोरोनाकै कारण मरेको खबर आउन थाल्यो । म डराउन थाले’ उनले भने, ‘सुरुमा त केही दिन समाचारनै हेर्न सकिन । फेसबुक पनि खोलिनँ ।’
त्यसपछि आफूमा विस्तारै हिम्मत जुट्न थालेको उनले बताए । ‘पहिले डर पलायो त्यसपछि हिम्मत,’ उनले भने, ‘केहि दिन पछि त अब म मर्दिन भन्ने लाग्यो ।’
उपचार सुरु भएपछि क्रमिक रुपमा सुधार आएको र कोरोन निको हुने विश्वास बढेको उनले बताए ।
‘म ठीक हुन्छु भन्ने थियो । तर, कहिले हुन्छ भन्ने थाहा थिएन’ उनले भने, ‘म ठीक हुन्छु भन्ने मेरो विश्वासले नै मलाई ठीक बनाएको जस्तो लाग्छ । डाक्टरहरुले पनि निकै राम्रो गर्नुभयो ।’
उनलाई निको हुने आत्मविश्वास बढिरहेका बेला, उनकै भाउजुमा पनि संक्रमण पुष्टि भयो । नेपालमा उनीबाटै कोरोनाको दोस्रो चरण सुरु भएको खबर सार्वजनिक भएपछि थप चिन्तित भए ।
‘म निको हुन्छु भन्नेमा विश्वस्त थिए । त्यही बेला भाउजु बिरामी हुनुभयो मलाई थप चिन्ता बढ्यो’ उनले भने ।
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका २१ बर्षका युवकलाई कोरोना निको भएपछि उनी थप उत्साहित भएका थिए । ‘उनी निको भएपछि मलाई पनि ठीक हुन्छ भन्ने विश्वास बढ्यो’ उनले भने ‘उनी गएको दुई दिनमा त म पनि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएँ ।’
मंगलबार साँझ उनी घर पुग्दै गर्दा उनका परिवारका सदस्य, आफन्त र छिमेकी पनि घर पुगिसकेका थिए । उनी घरको छतमा र आगन्तुकहरु तलैबाट कुराकानी गर्थे । उनी आउनेहरुलाई परै रहन आग्रह गर्थे ।
‘सबैलाई परै बस्न भन्छु । म पनि परै बस्छु’ उनले भने ‘महिना दिन अस्पतालमा कष्टपूर्ण रुपले बस्नु भन्दा हप्ता दिन घरमा आनन्दले एक्लै बस्नु जाति ।’
मंगलबार उनलाई भेट्न आउनेहरुले ठूलो संकटबाट जोगिएर आएको भन्दै हर्ष व्यक्त गरेका थिए । कतिले आँशु पसिन झारे ।
आफू उपचाररत हुँदा मिडियाको भूमिका प्रति उनले खुशप् व्यक्त गरे ।
‘सुरुमा मलाई उपचारमा चासो दिएनन् । तपाईंहरुले त्यसबारे समाचार तयार गर्नुभयो । त्यसपछि केही फरक भयो’ उनले भने ।
उनी अस्पतालमा हुँदा कैलाली कञ्चनपुरका अन्य ४ जना पनि आइसोलेसनमा थिए । उनी सबैसँग रमाइला कुरा गर्थे ।
‘अस्पतालमा हामी सबैबीच कुरा हुन्थ्यो । एकले अर्कालाई आत्मबल बढाउने कुरा गर्थे’ उनले सम्झिए ।
उनी निको भएर घर फर्किदा कैलाली लम्कीचुहाकी ६५ बर्षीया बृद्धा बढी चिन्तित थिइन् । उनले भने ‘भाउजु पनि निराश हुनुहुन्थ्यो ।’